Indlela yokwenza inwele elifutshane inyathelo ngenyathelo: ubuchule kunye nemibono | Amadoda aQinisekileyo
Ungazilungisa njani iinwele ezimfutshane
Fumanisa indlela yokwenza iinwele ezimfutshane inyathelo ngenyathelo. Ukusuka kwesona sicwangciso silungileyo sokulungisa iinwele zakho (ezomileyo kunye nokufaka imveliso) kwiimo ezahlukeneyo onokuthi uzinike ekugqibeleni, ngenani lemveliso oza kuyisebenzisa kunye nendlela yokuzigcina zingalahleki imilo.
Esona sizathu sokuya kweenwele ezimfutshane kukuthuthuzela okukhulu. Lukhetho olufanelekileyo kwabo bafuna ukuhlala belungile kusasa kwimizuzu nje embalwa. Kwaye, ngokwendalo, kulula ukuhlamba kunye nesitayile seenwele ezimfutshane kuneenwele ezinde.
1 Izigaba ezithathu zeenwele
1.1 Isondlo ngundoqo
2 Iingcamango zokuyibeka
2.1 Buyela ngasemva
2.4 Ubumdaka obuqhelekileyo
3 Yimalini imveliso ekufuneka isetyenzisiwe?
Izigaba ezithathu zeenwele
Amanyathelo amathathu anele ukuba alungele ukuya ekuseni. Into yokuqala ukuhlamba kunye nokoma. Imveliso iyasetyenziswa, kwaye ekugqibeleni inikwe imilo oyifunayo. Kwinyathelo lesithathu, kuya kufuneka ukhathalele iinkcukacha ezincinci, yiyo loo nto le ifuna olona hlobo lomonde.
Hlamba iinwele zakho kunye netawuli owomileyo kwangoko emva kokuphuma kwishower, njengoko uqhele ukwenza. Cinga ukusebenzisa isomisi esivuthayo ukugqiba ukususa konke ukufuma, ngakumbi ukuba ufuna ukufumana ivolumu engaphezulu. Khumbula ukuba indibaniselwano yokomisa kunye nemveliso ziya kukunceda uthobele amandla omxhuzulane kunye neenwele zakho
Faka imveliso ekhethelwe iinwele zakho (ibalaCola, thambisa, ioyile, ijeli ...) entendeni yesandla. Ukuhlikihla izandla zakho kunye, usasaze imveliso phezu kweentende zakho kunye neminwe. Yandisa imveliso ukusuka kwiingcambu ukuya ekupheleni. Sebenzisa izandla zakho ngeenwele zakho, usebenza ukusuka ezantsi ukuya phezulu. Sukuzama ukuyila okwangoku; Okwangoku, khathazeka nje malunga nemveliso inyibilika ngokuchanekileyo kwizinwele zakho.
Ekugqibeleni, usebenzisa iminwe yakho okanye ikama (kwiinwele ezingaqhelekanga kuhlala kukho eyokuqala kwaye isesikweni ngakumbi kwesesibini) yenza iinwele zakho ngendlela othanda ngayo. Ungayidibanisa ecaleni ukuba ufuna isiphumo esichaziweyo nesigcinayo. Ukuba ukhetha into engaqhelekanga, gxobha iitshixo zakho kancinci usebenzisa izandla zakho. Umnxeba wokugqibela owomileyo uya kukunika ukugqiba okuthe tye.
Izinwele ezimfutshane zifuna ukugcinwa. Ukuba umphezulu kwaye ngakumbi amacala akhula ixesha elide, iinwele ziphulukana nobume bazo kwaye iguquka ibe yinto eyahluke ngokupheleleyo.
Ndwendwela i-barber yakho rhoqo kwiiveki ezi-1-3 (kuxhomekeke kwizinwele zakho) ukuze iinwele zakho zihlala zikwinqanaba.
Zininzi iintlobo zetoupee. Kukho eziphakamileyo, ezingacwangciswanga kwaye emva koko kukho ezilinganiselweyo, ezinje ngale. Ukuba awuyazi indlela yokwenza iinwele ezimfutshane, iinwele zangasemva ezine-toupee lukhetho olufanele ukuqwalaselwa.
Ukwahlula-hlula ecaleni kwenza isibini esikhulu nesuti, yiyo loo nto ingumbono olungileyo wokuya eofisini kunye nokuzimasa iminyhadala. Ngexabiso elincinci le-wax kunye nezandla zakho kufuneka zanele ukuba ukwazi ukuphosa iinwele zakho kwelinye icala. Nangona kunjalo, ukuba ufuna ukubekwa ecaleni okuthe tyaba kwaye okusesikweni ngakumbi (isitayile seMad Men) uyakufuna ikama kunye nemveliso enzima, njengejeli.
Izinwele ezilungisiweyo zilungele ngokukodwa amadoda aneenwele ezithe nkqo. Ikwangumbono olungileyo ukuba unamakhefu okanye iinwele ezintle. Ukuze iinwele zisebenze kubalulekile ukuba icandelo elingaphambili linomzimba owaneleyo. Isomisi seenwele kunye nemveliso yesitayile iya kukunceda ukufezekisa oku.
Ukuba uneenwele ezimfutshane awudingi ukuba iinwele zakho zichazwe ngokucacileyo ukuze zikhanye, kwaye obu bubungqina. Kukho ii-tousled and spiky locks apha naphaya, kodwa isiphelo sisebenza kakuhle. Imalunga nokufuna indalo ngenkqubo esebenzayo yesifo esingafundwanga.
Yimalini imveliso ekufuneka isetyenzisiwe?
Kucetyiswa kakhulu ukuba usebenzise imveliso encinci xa uneenwele ezintle. Isizathu kukuba bongeza ubunzima obukhulu, into engabangeli mdla kumadoda ngolu hlobo lweenwele. Endaweni yoko, iinwele ezixineneyo zinokuphatha ixabiso elikhulu lemveliso. Nangeyiphi ndlela, ukuba ujonge umphumo wendalo okanye wokukhanya okuqinisekileyo kufuneka usebenzise isixa esincinci kunokwenzeka.
Imfihlo kukufumanisa isixa esifanelekileyo semveliso esikunceda ukuba ubumbe iinwele zakho ngaphandle kokuya ngaphaya komgca.. Kukho isixa esingaphaya kweenwele esele zinamafutha kakhulu okanye zincangathi. Uvavanyo kunye nempazamo ziya kubonisa ukuba ingakanani imeko yakho. Ukuba uhamba ngaphezulu, into engaqhelekanga (ngakumbi xa usebenzisa imveliso entsha), kwaye imveliso ishiya iinwele zakho zixinene okanye zinzima, hlala uzolile. Sebenzisa isomisi kwakhona endaweni yokuyihlamba kwakhona. Umoya oshushu uya kukunceda unyibilike imveliso kwaye uphinde ubenako ukuguquguquka kwizinwele zakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Ungazilungisa njani iinwele ezimfutshane